Miyay Kooxaha Premier league Mushaar yaraan Ulumiyaan Ciyaartoyda Ugu Fiican?
Eden Hazard waxa uu Chelsea kaga baxay isaga oo todobaadkii mushaar ahaan u qaadanayay £225,000 kun oo gini todobaadkii wuxuuna ka mid ahaa xidigaha ugu mushaarka qaalisan balse waxa uu Real Madrid ka helayaa mushaar ka sareeya iyo waliba magac ka wayn intii uu hore u soo yeeshay.
Laakiin wararka ayaa sheegaya in Eden Hazard uu todobaadkii mushaar ahaan uga qaadan doono kooxdiisa cusub ee Real Madrid £400,000 kun oo yuro taas oo sanadkii ka dhigi doonta in ka badan 19 milyan yuro.
Eden Hazard waxa uu heli karayay mushaar ka badan inta uu hadda Chelea ka qaadanayay laakiin waxa uu iska diiday in uu qandaraas cusub saxiixo si uu maamulka kooxdiisa ugu riixo in ay u ogolaadaan riyada uu lahaa ee uu ku doonayay in uu Real Madrid ka ciyaaro.
Inkasta oo ay kooxaha Premier League lacagta ugu badan ka helaan baahinta tooska ah ee TV-ga kulamada Premier league isla markaana ay lacago badan oo kale urursadaan, haddana marka loo eego mushaarka ay bixiyaan Real Madrid iyo Barcelona waxay noqonayaan kuwo aan mushaar badan bixin.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa min halka ciyaartoy ee ugu mushaarka sareeya lixda kooxood ee Premier League ugu waa wayn halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1- Kepa Arrizabalaga & N’Golo Kante- Chelsea
Mushaarka Todobaadkii: £150,000 kun oo gini
2-Alexis Sanchez- Manchester United
Mushaarka Todobaadkii: £350,000 kun oo gini
3- Mesut Ozil- Arsenal
4- Harry Kane- Tottenham
Mushaarka Todobaadkii: £200,000 kun oo gini
6-Kevin De Bruyne- Man City
Marka la eego mushaarka Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Kevin De Bruyne waxay aad uga sareeyaan xidigaha Mohamed Salah, Harry Kane iyo N’Golo Kante waana sababo ay xidigahani ku tixgalin karaan in ay ku biiri karaan kooxo magac ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay sare ugu kici karaan.
Sadio Mane, Pual Pogba, Kante, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk oo dhamaantood ka mid ah ciyaartoyda hadda baaqiga ku ah Premier league ayay kooxaha waa wayn ee horyaalka Ingiriisku ku qasban yihiin in ay ka walwalaan xaaladooda.
Real Madrid ayaa haddaba doonaysa saxiixyada Pual Pogba, Mohamed Salah iyo Sadio Mane iyada oo la filayo in ayna waqti fog noqon doonin xiliga uu soo bixi doono warka in Madrid ama Barcelona ay rekoodhka suuqa u jabin karaan Van Dijk.
Haddaba akhriste, maxaad ku qiyaasi kartaa hayaanka ciyaartoyda Premier league ugu fiican ee sida joogtada ah ugu ordaya Real Madrid iyo Barcelona? Miyay lacag yaraan ka ordayaan oo ay kooxaha aduun ku raacayaan mise sumcada kooxahan ayaa sababta ugu wayn ah?